VPN tsara indrindra ho an'ny Netflix - Desambra 2020 (Jereo ny atiny voafetra) - Fialam-Boly
6 VPN tsara indrindra ho an'ny Netflix - Desambra 2020
Netflix dia manana fanangonana atiny marobe azonao jerena, saingy noho ny famerana ny jeografika dia tsy azo atao mihitsy ny mijery ny atiny! Netflix dia mamela ny sasany amin'ireo tranombokim-boky ao anatiny hidirin'ny olona amin'ny faritra iray manokana, ary tsy azonao idirana izany raha tsy any amin'ny faritra iray ianao.
Saingy tsy azo atao ny miditra amin'ny atiny voafetra ara-jeografika noho ny fanampian'ny VPN tsara indrindra ho an'ny Netflix. Tsy vitan'ny hoe, mora ampiasaina ireto VPN ireto fa miasa tsara amin'ny Netflix koa.
Ny safidy proxy dia tsy safidy azo atao satria ny Netflix dia mametra ireo mpampiasa izay manana karazana proxy mba hiditra amin'ilay sehatra. Eto amin'ity lahatsoratra ity dia nodinihiko ny VPN tsara indrindra hijerena an'i Netflix.
Mampiasa ny iray amin'ireo VPN ireo aho, ary faly amin'izany. Zahao ireo VPN VPN ireo, ary makà iray hiditra amin'ny atiny efa ho hitanao.
VPN tsara indrindra ho an'ny Netflix - Top 6
Raha tsy te hilefitra amin'ny hafainganam-pandeha ianao, dia ExpressVPN no tokony ho safidinao. Io VPN VPN be mpampiasa io dia miasa tsara miaraka amina fitaovana marobe ao anatin'izany ny iOS, Android, Windows, Mac, Fire TV Stick, ary Apple TV, mba hahafahanao mankafy mijery Netflix amin'ny iray amin'ireo fitaovana ireo.
Misy mpizara mivantana mihoatra ny 3.000 misy amin'ny ExpressVPN. Ireo mpizara ireo dia mifototra amin'ny firenena 94 sy toerana 160 ka hahafahanao miditra amin'ny tranomboky iray manontolo an'ny Netflix miaraka amin'ny ExpressVPN.
Raha sanatria, manakana mpizara iray i Netflix, avy eo afaka mifandray amin'ny iray hafa ianao, hahazoana ny atiny ilainao. Amin'ny ExpressVPN, azonao atao ny manantena ny hafainganam-pandeha haingana, ary tsy hisy ny lagy rehefa mikoriana. Ary koa, tsy misy fameperana angona amin'ny ExpressVPN, ary afaka mankafy mijery seho na sarimihetsika araka izay ilainao ianao.
Azonao atao koa ny mampifandray amin'ny alàlan'ny fitaovana dimy miaraka amin'ny ExpressVPN, izay midika fa afaka mankafy mijery sarimihetsika sy seho amin'ny fitaovana misy azy ireo ihany koa ny fianakavianao miaraka amin'ny drafitra famandrihana tokana ho an'ny ExpressVPN.
Ny zavatra tsara indrindra momba ExpressVPN no antoka miverina mandritra ny 30 andro ! Azonao atao ny mangataka ny volanao raha mieritreritra ianao fa VPN tsy misy ilana azy ity, ary azoko antoka fa tsy hanao izany ianao.
Endri-javatra lehibe an'ny ExpressVPN:
Fitsapana hafainganam-pandeha namboarina
Fanohanana mivantana 24 * 7
Antoka miverina amin'ny vola 30 andro
Miara-miasa amin'i Hulu, BBC iPlayer, Sky TV, HBO GO, ary Netflix
CyberGhost dia VPN azo antoka hafa ho an'ny Netflix satria azonao atao ny miditra amin'ny atiny misy any amin'ny firenena vitsivitsy toa an'i Etazonia, UK, Aostralia, Kanada, ary maro hafa. Ity VPN ity dia azo ampiasaina amin'ny telefaona finday sy PC, izay midika fa azonao ampiasaina amin'ny fitaovana maro eny am-pandehanana.
CyberGhost dia manana mpizara 5 900 eo ho eo any amin'ny firenena 90, ary izany dia hanampy anao amin'ny fidirana amin'ny atiny na eo aza ny fameperana ara-jeografika. Ankoatr'izay, amin'ny CyberGhost, misy fetra voafetra na tsy misy buffering, ary afaka mandefa atiny kalitao HD ianao nefa tsy misy olana.
Azonao atao ny mampiasa ny VPN VPN amin'ny fitaovana fito miaraka amin'ny smartphone, ary PC. Ho fanampin'izany, CyberGhost dia manome antoka 45 andro hiverenana amin'ny vola miaraka amin'ny drafitra VPN, hahafahanao matoky fa azonao atao ny mitaky io vola io raha tsy faly amin'ny VPN ianao.
Tahaka ny ExpressVPN, CyberGhost koa dia manolotra ny fanohanan'ny mpanjifa amin'ny famantaranandro, ary azonao atao ny mifandray amin'izy ireo mba hahazoana karazana fanampiana mifandraika amin'ny fametrahana sy fampiasana ny VPN VPN.
Endri-javatra manan-danja amin'ny CyberGhost:
Data tsy voafetra
Miasa amin'ny fitaovana fito miaraka
Manatsara indrindra ho an'ireo mpampiasa Netflix
Miasa amin'ny Android, iOS, Smart TV, macOS, ary Windows
Raha ny mijery Netflix, NordVPN no safidin'ny mpampiasa voalohany. Mampiasa ihany koa aho NordVPN ho an'ny Netflix noho ny haingam-pandeha haingana sy ny fifandraisana azo antoka. Ary koa, ny VPN dia miasa tsara amin'ny fampiharana hafa koa, ary hahazo ianao 30 andro antoka antoka vola miaraka aminy.
NordVPN dia misy amin'ny endrika fampiharana finday, ary azonao atao aza ny mampiasa azy amin'ny tranokala PC. Ankoatr'izay, ny VPN dia mifandray haingana amin'ireo mpizara an'arivony miparitaka manerana ny firenena 59, ary afaka manomboka mijery an'i Netflix ianao mandritra ny diany.
NordVPN dia miara-miasa amin'ny BBC iPlayer, Hulu, ary sehatra hafa koa tsy ho voafetra ho an'i Netflix fotsiny ny fialamboly. Azonao atao ny mametraka ity VPN VPN ity amin'ny fitaovana 6 hampiasana azy miaraka. Ny fanohanana mivantana ny chat dia tsy mitovy, ary azonao atao ny manontany ny fangatahana rehetra momba ny helpdesk izay misy 24 * 7 hanampy anao.
Toy ny VPN hafa, tsy misy fetra famerana isam-bolana ao amin'ny NordVPN, ary afaka mandefa data tsy misy fetra miaraka aminy ianao. Tiako ny mampiasa ny rindrambaiko findainy amin'ny iPad-ko, ary mampifandray ahy haingana amin'ny atiny Netflix tiako ho jerena.
Endri-javatra manan-danja amin'ny NordVPN
Antoka miverina 30 andro
Miasa amin'ny fitaovana enina miaraka
Mpanjifa voatsinjara manokana ho an'ny Netflix
Fanohanana mivantana amin'ny chat
PrivateVPN dia manolotra fidirana tsara kokoa amin'ny atiny voafetra Netflix satria misy ny mpizara saika manerana ny firenena lehibe rehetra. Ary koa, ny Netflix VPN dia nahavita tsara tamin'ny fitsapana haingana, ary izany no antony nitanisako azy teto ho anao.
Azonao atao ny miditra amin'ny VPN amin'ny alàlan'ny rindranasa finday sy amin'ny browser koa. PrivateVPN dia mamela anao hifandray amin'ny fitaovana 6 miaraka ary tsy mila miditra imbetsaka ianao rehefa mijery Netflix miaraka amin'ny fitaovana hafa.
Ny fantsom-pifandraisana tsy voafetra dia manafoana ny famerana ny fidirana amin'ny angona voafetra, ary afaka mijery atiny betsaka araka izay ilainao ianao. Ny hery enkripsi 2048-bit dia mitazona ny kaontinao ho voaro sy voaro amin'ny fotoana rehetra.
PrivateVPN dia manome antoka famerenam-bola 30 andro, hahafahanao mahazo ny vola miverina raha tsy hitanao fa mahasoa ny VPN VPN. Nanandrana nampiasa PrivateVPN aho, ary izany no VPN mora vidy indrindra azonao atao amin'ny vola.
Endri-javatra lehibe an'ny PrivateVPN:
Miaraka amin'ny SurfShark dia afaka mampifandray fitaovana tsy manam-petra miaraka ianao, ka tsy ianao irery no faly mijery Netflix. Azo ampiasaina ho an'ny mpampiasa finday avo lenta ny VPN, ary azonao atao koa ny mampiasa azy amin'ny alàlan'ny browser PC. SurfShark dia manolotra bandwidth tsy voafetra, ary tsy misy fetra amin'ny atiny azonao jerena miaraka aminy. Mora ny mampiasa VPN, ary azonao apetraka eo am-pandehanana. Ary koa, SurfShark dia nanambara fa tsy hisy buffering mihitsy ary ho haingam-pandeha haingam-pandeha ianao hahazoana ny atiny amin'ny kalitao HD.
Ny VPN dia misy mpizara 1.040+ any amin'ny firenena samihafa eran'izao tontolo izao. Ny ampahany tsara indrindra amin'ny SurfShark dia ny fisian'ny maody NoBorder izay mamela anao hihoatra ny karazana fameperana rehetra, ka hahatonga azy io ho iray amin'ireo VPN tsara indrindra ho an'ny Netflix.
Ny ankamaroan'ny VPN tsy miasa any Shina, UAE, ary Torkia, fa ny SurfShark no ilainao hijerena ny Netflix raha any amin'ireo toerana ireo ianao. Rehefa misoratra anarana amin'ny SurfShark ianao dia hahazo ilay antoka miverina mandritra ny 30 andro, ka azo antoka ny volanao raha manafoana ny famandrihana alohan'ny 30 andro aorian'ny hisafidiananao azy.
Endri-javatra manan-danja amin'ny SurfShark:
Fifandraisana tsy misy fetra
Tsy misy ferana bandwidth
Tsy misy buffering mihitsy
Miasa amin'ny sehatra maro ao anatin'izany ny YouTube, Sky TV, HBO GO, ary maro hafa
Tena tsara amin'ny fidirana atiny voafetra ara-jeografika
VyprVPN dia miaraka amin'ny protokol fiarovana azy manokana ho fiarovana tsara kokoa raha mijery atiny ao amin'ny Netflix ianao. Ny Netflix VPN dia miasa tsara amin'ny fitaovana samihafa, ao anatin'izany ny smartphone sy solosaina. Azonao atao koa ny mampifandray fitaovana samihafa 5 miaraka amin'ny VyprVPN.
Manolotra bandwidth tsy voafetra ny VPN, ary afaka mijery atiny ianao nefa tsy manahy momba ny fameperana angona. Misy mpizara 700 eo ho eo any amin'ny firenena 70 samihafa izay afaka mandika amin'ny adiresy IP 200 000, ka raha manakana ny iray ny Netflix dia afaka mampiasa iray hafa ianao hijerena Netflix.
Ankoatr'izay, ny VyprVPN tsy manelingelina ny hafainganan'ny Internet, hahafahanao mijery atiny tsy asiana buffering. Nandritra ny fanandramako ny VyprVPN dia hitako fa tena mandeha tsara ilay rindranasa finday. hahazo fanohanana amin'ny Internet ianao miaraka amin'ny VPN amin'izay dia hahazo ny fanampiana ilainao hampifandraisana ny VPN VPN.
Raha resaka antoka famerenam-bola no resahina dia tonga miaraka amin'ny antoka 30 andro ny VyprVPN, ary azonao atao ny mamerina ny volanao raha misafidy ny hanafoana ny famandrihana alohan'ny fotoam-pitsarana 30 andro ianao.
Endri-javatra lehibe an'ny VyprVPN:
Teknolojia mandroso ho an'ny fiarovana azo antoka
Famindrana mpizara mavitrika
Fantsom-pifandraisana tsy voafetra
Mifanaraka amin'ny Firefox, iOS, Windows, Blackberry, Linux, ary Chromebook
Tsindrio eto raha hividy VyprVPN ho an'ny Netflix miaraka amin'ny Discount (ampio eto ny rohy misy sary)
Fa maninona no mila VPN tsara indrindra ho an'ny Netflix?
Misy antony maro tokony hijerena anao ny mijery Netflix miaraka amina VPN. Voalohany indrindra, tsy afaka miditra amin'ny atiny voafetra ara-jeografika ianao, ary mila VPN mihoatra ny fameperana. Ary koa, Netflix dia afaka mamaky mora foana ny ankamaroan'ny proxy ka tsy azonao ampiasaina.
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny fampiasana ireo VPN VPN tsara indrindra dia ireto dia mora vidy, ary tsy mila manaparitaka vola aminy ianao. Hizaha toetra ny VPN rehetra voatanisa amin'ity lahatsoratra ity aho, ary ny ankamaroan'izy ireo dia nohatsaraina manokana hijerena an'i Netflix.
1Q. Azon'ny Netflix sakanana ve ireo VPN ireo?
taona:Misy adiresy IP umpteen azo ampiasaina, ka na dia manakana ny IP aza ny Netflix, dia afaka mampiasa safidy hafa ianao hidirana amin'ny atiny. Raha fintinina, azonao atao ny mijery ny atiny voafetra ara-jeografika tsy misy manahirana anao satria tsy afaka manakana ny adiresy IP rehetra amin'ny VPN manokana ny Netflix.
2Q. Ahoana ny fomba hijerena atiny ho an'ny mpijery UK fotsiny?
taona:Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpizara UK mampiasa ny VPN, ary amin'ity fomba ity dia hahafahanao miditra amin'ny atiny ho an'ny mpihaino UK fotsiny. Tsotra be izany, ary afaka misafidy firenena manokana mampiasa VPN ianao.
3Q. Ahoana ny fanafoanana ny famandrihana?
taona:Azonao atao ny manafoana ny famandrihana amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny kaontinao. Hamarino tsara fa hanafoana ny famandrihana alohan'ny fahataperan'ilay fe-potoana fiantohana famerenam-bola VPN mba hamerenana ny vola.
Mora ny mampiasa ireo VPN ireo, ary azonao atao ny misintona ny rindranasa finday avy amin'ny fivarotana fampiharana voatokana. Ary koa, ireo dia miasa tsara amin'ny PC mba hahafahanao mijery Netflix amin'ny fitaovana maro. Hamarino tsara fa mitaky ny fihenam-bidy amin'ny alàlan'ny rohy misy amin'ity lahatsoratra ity.
Nampiasainay ireo rohy mankamin'ny tranonkala ofisialy, noho izany dia mividy ny famandrihana mivantana avy amin'ny tranokalan'ny VPN ianao.
Serivisy VPN tsara indrindra amin'ny taona 2020
Midina ve ny MangaStream? Safidy tsara indrindra (2020)
Ahoana ny fomba fampidinana sy fametrahana optifine ho an'ny Minecraft?
tranokala lalao ho an'ny pc
mijery maimaim-poana amin'ny sarimihetsika teatra
fampiharana netflix ho an'ny ipad download
youtube mankany m [p3
manokana ram bebe kokoa ho an'ny minecraft twitch
ny fomba hijerena hotstar any Etazonia